Hargeysa:Fagaare la dhigay Maydka ilmo yar oo shandad lagu qufulay | Berberanews.com
Home WARARKA Hargeysa:Fagaare la dhigay Maydka ilmo yar oo shandad lagu qufulay
Hargeysa:Fagaare la dhigay Maydka ilmo yar oo shandad lagu qufulay
Hargeysa-(Berberanews)-Ciidanka Booliska magaaladda Hargeysa ayaa ku guul daraystay inay baadhis mugleh ku sameeyaan dhacdo argagax ku abuurtay dadweynaha ku dhaqan xaafadda Idaacadda ee degmadda 26-ka June ka dib markii subaxnimaddii hore ee Isniintii meel banaan la dhigay ilmo yar oo mayd ah oo shandad lagu soo riday.
Ciidanka Booliska ayaan goobtaasi iman muddo dhawr saacadood ah, waxaana taasi sababtay in Boqolaal qof oo ka mid ah dadweynihii xaafadaasi oo ku soo ururay goobtii ay aakhirkii jabiyeen shandadii waxaanay arkeen in ilmahaas maydka ah la soo tuuray isla habeenkii uu dhashayba. Waxaanay intaasi ku dareen in ay filayaan in ilmahaasi uu ku dhintay markii shandada lagu xidhay.
Waxa la sheegay in Taliyaha saldhiga Booliska Daloodho uu xili dambe u soo diray laba askari oo uu midi yahay ciidanka dhar cadda, kuwaasi wax talaabo ah qaadin hase yeeshee iska joogay goobtaasi.waxa iyana duhurkii yimid laba askari oo ka tirsan Ciidanka Baadhista dambiyadda ee CID-da kuwaasi oo aan iyana wax talaabo ah qaadin . Dad goob joog ah ayaa noo sheegay in duhurkii la qaaday maydkaasi oo la aasay.
Dadwynaha xaafadaasi waxay la yaabeen sida ciidanka Boolisku aanay wax masuuliyad iskaga saarin sidii ay maydkaasi ay aasi lahaayeen isla markaana u dabo-geli waayeen cidii jariimadaasi weyn gashay.
Wariyeyaal ka tirsan Wargeyska DAWAN oo shalay tagay Saldhiga dhexe ee Hargeysa si ay Booliska wax uga weydiiyaan dhacdadan foosha xun, waxaana halkaasi ay kula kulmeen Taliyaha qeybta Booliska ee galbeedka Hargeysa Cabdi Cali Xayd oo ku dooday inaanu saldhiga Daloodho oo ay arrintani ka agdhacday aanu xukumin hase yeeshee saldhigaasi laga xukumo qeybta bariga Hargeysa.
Sidoo kale Taliyaha qeybta Booliska ee Bariga Hargeysa Maxamed Maxamuud oo isna aanu xalay khadka Telefoonka kula xidhiidhnay si aanu wax uga weydiino ayaa sheegay inaanay khusayn waxaanu sheegay in arrintaasi la weydiiyo Taliyaha Saldhiga Daloodho.
“Waxaanu la yaabnay saacadaha badan ee maydka ahi meesha yaalay iyo sida aanay Ciidanka Boolisku uga gudan waajibaadkii ka saarnaa waxay ahayd inay isla marka lagu wargeliyayba yimaadaan oo inta ay iyagu gacantooda ku jabiyaan shandada maydku ku jiray isla markaana ay baadhis ka bilaabaan oo ay cid uun u soo qabtaan taasina waa ceeb weyn iyo fashilaad soo waajahday saldhiga Booliska ee Daloodho,”ayuu yidhi Muxmed Cabdi oo ka mid ahaa dadweynihii goobtaasi ku soo ururay oo u waramyayay Wargeyska DAWAN.
Sidoo kale Hooyo Canab Ismaaciil oo ka mid ahaa dadkii goobta tagay ayaa ciidanka Booliska Hargeysa iyo kuwa CID-da ku eedeysay inay sameeyeen masuuliyad darradii u weynayd. “Waxaan leeyahay Ciidank Boolisku way ku fashilmeen sidii ay u wajaheen arrintan waxaan kala garan la’ahay inay ka tahay aqoon xumo iyo inay masuuliyad darro ka tahay,”ayay ku tiraabtay Hooyadaasi oo la hadashay Suxufiyiin ka tirsan Wargeyska DAWAN oo goobta kula kulmay.
Previous articleMaxaa dunida ka dhacay maanta oo kale 11 April? Video
Next articleBaahida ay Somaliland u qabto saxaafadda bulshada